Biyo la’aan laga soo sheegayo Degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku dhow dhow – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ceelbuur (Mareeg.com)-Waxaa Biyo La’aan xoogan ay ka jirtaa Deegaanno Hoostaga Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud oo dhawaan gacan ku heynteeda lagala wareegay Ururka Al Shabaab.
Dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa markii ay ka baxayeen Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud waxa ay amreen Shacabka in Ceelasha gebi ahaan la damiyo Matoorada ay ku shaqeeyaan lagana saaro bambooyinka taas saameyn ku reebtay dadka degan Ceelbuur iyo deegaanada ku dhow dhow.
Shacabkii degenaa Degmada Ceelbuur oo maciin biday duleedka Degmadaasi kadib Hanjabaad ay u jeediyeen Al Shabaab oo in Magaalada ay ka guuraan ah ayaa haatan Waraabaya ama Cabaya Biyo aan Nadiif ahayn.
Si kastaba Xaaladda Degmada Ceelbuur iyoo deegaanada ku xeeran ayaa Xiriiro aan la sameynay Hay’adda Gudaha ah oo ka shaqeeya arrimaha Beni’aadanimada ay sheegayaan in haddii sidaan ay u sii Biyo la’aato Musiibo Ben’aadanimo ay ka dhaci karto.